Maalinta: Maarso 30, 2019
Khariidadda Marmaray iyo Halkalı Joojinta iyo Jadwalka Gebze Marmaray: Marmaray, mashruuca isku xiraya Yurub iyo Anatolian Side ee Istanbul Halkalı iyo joogsiga mitirka Gebze iyo waqtiga. [More ...]
Qiyaastii laba qof oo ah 50 ayaa waxoogaa dhaawac ah markii labo tareen ay isku dhaceen gobolka Como ee waqooyiga Talyaaniga. Adeegga dab-demiska ee Talyaani, dadka 50 ayaa ku dhaawacmay shil laba tareen oo ka dhacay Como, waqooyiga dalka. [More ...]
31 March Doorashada Doorashooyinka Degmadda ee BursaRay
31 Waxaa la sheegay inay jiraan duulimaadyo dheeri ah oo taga BursaRay sababtoo ah doorashooyinka maxalliga ah ee la qaban doono Axadda (Maarso). Marka loo eego bayaanka uu soo saaray BURULAŞ, 31 wuxuu awood u yeelan doonaa inuu u codeeyo muwaadiniinta maxalliga ah [More ...]
5 Duulimaad Dheeraad ah oo loogu talagalay IZBAN
İZBAN A.Ş, 31 5 waxay qabanqaabisaa adeegyo tareen dheeri ah subaxa doorashada si loo hubiyo in gaadiid ee saraakiisha codbixinta doorashooyinka la qaban doono Axadda. Tareennada laga raaco Tepeköy iyo Aliağ inta u dhaxaysa 03.30 iyo 04.30 [More ...]
Kardemir wuxuu sii wadaa inuu la shaqeeyo macdanta guryaha
Kardemir, oo ah isticmaaleha ugu weyn ee dhuxusha iyo saliidaha dalkeenna, wuxuu la saxeexday heshiiska sahaminta qaawan ee 2019 sanadka ee shirkadda 'Özkoyuncu Mining Company', oo ah mid ka mid ah alaabada ugu weeyn. Kardemir Gudoomiyaha guddiga Kamil [More ...]
Injiilada Ardayda Gaadiidka Dadweynaha ee Bilaashka ah ee Adana
Duqa magaalada 60 ee Adana iyo Duqa Magaalada Adana Huseyin Sozlu, oo kumanaan arday ah siiya fursad ay ugu diyaar garoobaan imtixaanaadkooda koorsooyin bilaash ah, ayaa sidoo kale ku jira gaadiidka dadweynaha bilaashka ah ee taageerada waxbarashada. Dowlada Hoose ee Adana [More ...]
Gaadiidka Daadalka ee Tagaya Tarbiyadii Xilliga Xagaaga ee Antalya
1, oo sii wadata adeegyadeeda inta u dhaxaysa Antalya Kaleiçi Marina iyo Kemer Marina, waxay u beddeli doontaa jadwalka xagaaga illaa bisha Abriil. Inta u dhaxaysa 2009-2014, 5 wuxuu uga haray inuu qudhmo inta lagu gudajiray sanadka. [More ...]
Maalinta Doorashada si loo bilaabo Gaadiidka Dadweynaha ee Manisa at 06.00
Ku dhawaaqida ay sameysay Dowlada Hoose ee Manisa, 31 Maarso 2019 ayaa lagu qaban doonaa Xulashada Maamulada maxalliga ah sababta oo ah basaska gaadiidka dadweynaha ayaa bilaabaya inay u adeegaan subaxa 06: 00. Ku dhawaaqida ay sameysay Dowlada Hoose ee Manisa [More ...]
Baaskiilada fudud ee loo adeegsado Sakarya
Mashruuca Bike ee 'Smart Bike', oo ay billowday Dawladda Hoose ee Magaalada Sakarya si kor loogu qaado isticmaalka baaskiillada magaalada, ayaa bilaabay inuu bixiyo adeeg. Pistil, "Xarummaha Gawaarida Casriga ah ee loo yaqaan 'Xarumaha Baaskiillada' ee kaladuwanaanta dhibco kala duwan oo magaaladeena leh Nidaam Wadaag [More ...]
SAKUS si loo hagaajiyo Xoojinta gaadiidka ee Muwaadiniinta
SAKUS, oo kordhin doonta raaxada gaadiidka ee muwaadiniinta ku sugan gaadiidka dadweynaha qeybta Waaxda Gaadiidka, ayaa dib loo cusbooneysiiyay. Pistil, “Astaamaha dib loo cusbooneysiiyay iyo meesha iyo cinwaanka cinwaanka khariiddada dhammaan Xarumaha Xidhitaanka Kaararka ayaa jiri doona. Khadka tooska ah [More ...]
Cusub cusub oo ku-meel-gaadh ah ee Kuruçeşme
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadaysaa dhammaystirka mashaariicda iyadoo dib u cusboonaysiinta jidadka, iskuxiridda iyo isgoysyada meelo badan oo magaalada ah isla markaana siineysa muuqaal casri ah. Xaaladdan oo kale, isgoyska qadiimiga ah ee ku yaal bartamaha degmada Izmit Kuruçeşme ayaa gabi ahaanba laga saaray. [More ...]
Stadler waxay soo saari doontaa Qalabka Metro ee 127 ee Atlanta Metro
Stadler wuxuu soo saari doonaa gawaarida 127 metro ee loogu talagalay Atlanta Metro. Qandaraaska waxaa lagu saxeexay 600 milyan oo doolar. [More ...]
Automechanika Isticmaalka Mashruuca Istambuul ee Istambuul
3 ugu weyn adduunka. automechanika Istanbul, carwada ugu weyn ee warshadaha gawaarida, 4-7 waxay ka bilaabmaysaa Abriil 2019 xarunta TÜYAP Istanbul Fair iyo Congress Center. Kooxda heysata horyaalka dhoofinta wada Turkey ee waaxda warshadaha baabuurta [More ...]
'Gaadiidka korontada' oo u socdaalay Kordon
Dawlada Hoose ee Magaalada İzmir waxay labo ka mid ah gawaarida nooca Victoria Classic ee ka howlgasha Kordon kana dhigaan gawaarida korantada. Laga bilaabo bisha Juun, gawaaridan aamusnaanta leh waxay awoodi doonaan inay qaadaan xNUMX dadka waaweyn iyo carruurta 4 marka laga reebo darawalka. [More ...]